मताधिकार प्रयोग गरौं
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचन संघारमै आइपुगेको छ । यो निर्वाचनका लागि अहिले सबै तयारी भएको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ । निर्वाचनका लागि सबै खालको तयारी भइसकेपछि मत लिने र मत दिने कामका लागि जनताको चासो हुनु अस्वभाविक हुँदै होइन । त्यसैले यो चुनावी महान अभियानमा सबैले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नका लागि पक्कै पनि हिच्किचाउनु हुँदैन ।
मताधिकार प्रयोग केका लाग गर्ने ? भन्नेहरु पनि छन् । जति भोट दिए पनि केही हुने होइन भन्नेहरु पनि नभएका होइनन् । यो मताधिकार प्रयोगले देशको भविष्य कता र कस्तो बनाउने भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्न सहज हुन्छ । यो निर्वाचनले देश र जनताको भविष्य निर्धारण गर्ने हुन्छ । त्यसैले निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्ने कुरा खेलाची पक्कै होइन । निर्वाचनका लागि भएका सबै किसिमका तितामिठा अनुभवलाई संगालेर चुनावी अभियानमा एकजुट भएर मताधिकार प्रयोग गर्न कोही हिच्किचाउनु हुँदैन ।
अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचनले देशको नयाँ संरचनाको कार्यान्वयन गर्नेछ । त्यसैले पनि कस्तो पार्टी र व्यक्तिलाई आगामी पाँच वर्ष देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न दिने भन्नेबारे निधो गर्ने जिम्मेवारी स्वयम जनताको हातको कुरा हो । त्यसैले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने बेलामा धेरै पाटोबाट सोंचेर देश र जनताको पक्षमा, राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा लडेका पार्टीलाई मत दिनु पर्दछ । होइन भने देश फेरि अप्ठेरोमा पर्नेछ, जनताले दुःख पाउने छ । त्यसैले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दा धेरै कुराको बिचार पुर्‍याउनु पर्दछ ।
निर्वाचनको समयमा धेरै किसिमका आश्वासन बाँड्दै नेता र कार्यकर्ताहरु आउने गर्दछ । यो अभियानमा नेता र कार्यकर्ताहरुले पनि उत्तिकै प्रलोभनहरु दिने गर्दछ । यो अस्वभाविक पनि होइन । सबैले आफू राम्रो, अरु खत्तम भन्दै हिड्छन् । त्यो पनि नराम्रो पाटो भएन । सबैले आफू नै सक्षम र अब्बल हो भनेर भन्नुलाई कमजोरीका रुपमा लिनु हुँदैन । तर मतदाताले एउटा कुरामा भने ध्यान दिनुपर्छ, त्यो भनेको विगतमा आफूलाई राम्रो भन्नेहरुले के गरे ? र आगामी दिनमा साँच्चै उनीहरुले राम्रो गर्न सक्छ ? भनेर प्रश्न गर्नु राम्रो हुन्छ । होइन भने आश्वासन र ललीपपमा आफ्नो अमूल्य मत खेर फाल्नु हुँदैन । आफ्नो मतको सही रक्षा गर्नका लागि जनता स्वयम सचेत हुनु पर्दछ ।